जाने हो मुस्ताङ ? मुटु दह्रो पार्नुस् र हेर्नुस् 'मस्ट डेन्जरस रोड' (भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
जाने हो मुस्ताङ ? मुटु दह्रो पार्नुस् र हेर्नुस् 'मस्ट डेन्जरस रोड' (भिडियो)
टेकनारायण भट्टराई , २१ कार्तिक २०७५
मुस्ताङ । यो बर्ष पनि दशैँ तिहारको बिदा मनाउने आन्तरिक पर्यटकका लागि मुस्ताङ रोजाइमा पर्यो । तर बेनी-जोमसोम सडकको डरलाग्दो यात्रा जो कोहीले सजिलै बिर्सन हम्मे पर्छ । कारण- जिउ कँपाउने खतरनाक सडक ।
यो सडक चौडा गर्ने र स्तरोन्नतिको काम चलिरहेको छ । पलपलमा पहिरोको जोखिम रहन्छ । डरलाग्दा भीर काटेर बनेका साँघुरा सडक, तल सुसाउने खोला र खोँच, बेनी देखि जोमसोम सम्मको दृश्य यस्तै छ । काली गण्डकी किनारै किनार रहेको कच्ची सडकको अधिकांश भाग अक्करे भीर चिरेर बनेको छ ।
पहिरोको जोखिमका कारण सडकमा भौतिक र मानवीय क्षति हुन सक्ने खतरा रहेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले गत साता यो सडकमा रातको समयमा सवारी सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङलाई जोड्ने यो सडकमा मुक्तिनाथ दर्शनका लागि जाने तीर्थयात्रीको घुँइचो देखिन्छ । विदेशी पर्यटकको उत्तिकै उपस्थिति छ भने मोटरसाइकलमा पुग्ने युवा पुस्ताको सङ्ख्या बर्ष दर बर्ष बढ्दो छ ।
पर्यटकका लागि मुस्ताङको बढ्दो आकर्षणलाई पछ्याउँदै डिसी नेपालको टिम यो सडकको अवस्था उतार्न मुस्ताङ पुगेको छ । यो पहिलो भिडियो शृङ्खलामा मुस्ताङ पुग्ने सडकका जोखिम र रोमाञ्चक सडक दृश्य प्रस्तुत छ ।